Thwebula Dropbox 22.2.2 – Android – Vessoft
Ikhasi elisemthethweni: Dropbox
Eyinqolobane – a software ukusebenza nge-USB ifu. Isofthiwe ikuvumela ukuba ugcine amafayela emidya, umbhalo imibhalo noma izithombe esilondolozini ifu ukufinyelela jikelele ukulanda amafayela. Dropbox isekela ukuvumelanisa okuzenzakalelayo idatha phakathi izinhlobo ezahlukene amadivaysi. Isofthiwe inikeza ezingeni lelisetulu ukuvikelwa ifayela okuyinto izuzwe ekudluliseleni idatha esiteshini ngekhodi nokugcina ulwazi ngendlela ngekhodi. Dropbox ugcina umlando izinguquko isitoreji futhi kwenza ukuba kutholakale amafayela kusulwe ngesikhathi esithile.
Ukulandwa Easy of amafayela kusitoreji ifu
Synchronizes idatha phakathi kumadivayisi ezahlukene
Unika ukufinyelela jikelele ukulanda amafayela
Izinga High zokuvikelwa kokwaziswa
Ikhono alulame amafayela asusiwe
Amazwana ku Dropbox
Dropbox software ehlobene
Isofthiwe oda fast and kalula ngasese umshayeli nge imoto executive ngamanani aphansi futhi nemali lekhokhwako esamukelekayo uhambo.
Ukuphepha kwe-CM – i-antivirus ephelele yokuvikela ifoni ekulweni namagciwane ezinhlobo ezahlukahlukene. Isoftware isebenzisa ubuchule bwanamuhla ukuthola nokususa izinsongo.